क्रिकेटर गौतम गम्भीरलाई तीज लागेको हो ? होइन भने के हो यो पारा ?, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
क्रिकेटर गौतम गम्भीरलाई तीज लागेको हो ? होइन भने के हो यो पारा ?
एजेन्सी। भारतीय क्रिकेटर गौतम गम्भीर का फोटोहरु विगत १–२ दिन निकै चर्चामा छन् । फोटोमा उनले सारी लगाएका छन् । शिरमा सारीको सप्कोले ढाकेका छन् । र, निधारमा टिका लगाएका छन् । उनको यो पहिरन देख्दा धेरैलाई लाग्यो होला उनलाई तीज लाग्यो । तीज लागेको भए उनको सारी कालो किन ? किनकि तीजमा त रातो सारी लगाइन्छ ।
यो सबै गम्भीरलाई तीज लागेर होइन उनी किन्नर समाजको उक कायृक्रममा जाँदा भएको हो । गम्भीर हालै किन्नर समाजको आयोजनामा भएको एक कार्यक्रममा पुगेका थिए । कार्यक्रममा किन्नर (तेस्रोलिंगी)हरुले गम्भीरलाई आफूहरुजस्तै ।ृंगार गराए । यो कार्यक्रममा गम्भीर पनि किन्नरजस्तै पहिरनमा सहभागी भए । यही कार्यक्रममा खिचिएका तस्वीर भाइरल भएका हुन् । गम्भीरले यसअघि रक्षाबन्धनमा किन्नरहरु अबिना अहर र सिमरन शेखलाई बहिनी मान्दै उनीहरुबाट राखी पनि बाँधेका थिए ।